मध्यरात एउटै ओछ्यांनमा भेटिएका देवर भाउजु सम्पर्कमा आए, चल्याे यस्तो रुवाबासी- (भिडियो हेर्नुहोस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > मध्यरात एउटै ओछ्यांनमा भेटिएका देवर भाउजु सम्पर्कमा आए, चल्याे यस्तो रुवाबासी- (भिडियो हेर्नुहोस्)
मध्यरात एउटै ओछ्यांनमा भेटिएका देवर भाउजु सम्पर्कमा आए, चल्याे यस्तो रुवाबासी- (भिडियो हेर्नुहोस्)
admin January 13, 2022 भिडियो, समाज 0
मध्यरात एउटै ओछ्यांनमा भेटिएका देवर भाउजु सम्पर्कमा आएका छन् । यसरी सम्पर्कमा आएपछि उनिहरूले ‘हामीले ठुलो गल्ती गर्यौ भन्दै रुवाबासी गरेका हुन् । आगाडि नै सोच्नु पर्ने कुरा पछाडि सोचेर के फाइदा? भन्दै गाउँलेहरूले यस्तो भनेका छन् । भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेला>>>
काठमाडौं : विश्वभरी महामारीको रूपमा फैलिएको भाइरसको नयाँ भेरियन्ट(ओमिक्रोन) विश्वका १४ मुलुकमा फैलिएको छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको सो भाइरस छोटो समयमा १४ मुलुकमा फैलिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिका, बोत्स्वाना, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी, हङकङ, इटाली, बेल्जियम, इजरायल, डेनमार्क, अष्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, अष्ट्रेलिया र क्यानडा लगायतका देशमा नयाँ भेरियन्ट देखिएको छ।
यसरी छोटो समयमा फैलिएको भाइरसबाट नेपाल उच्च जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। नयाँ भेरियन्टको पहिलो माध्यम हवाई माध्यम भएकाले उडानलाई कडाइ गर्ने तयारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अफ्रिका तथा जोखिम रहेको मुलुकलाई नेपाल प्रवेशमा कडाइ गर्दै अनअराइभल भिसामा रोक लगाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जनकारी दिए।अफ्रिकाको अनअराइभल भिसा रोक्न अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिइएको छ।
साथै अन्य देशको हकमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यता कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सिसिएमसीले पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखिएको मुलुकमा हवाई उडान रोक्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ। साथै भारतसँगको सीमानाकामा समेत कडाइ गर्ने र परीक्षणको दायरा बढाउने सिफारिस पनि बैठकले गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकी मुलुकबाट आउने यात्रुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन र अनअराइभल भिसा नदिन समितिले सिफारिस गरेको थियो।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भाइरसको नयाँ भेरियन्टको रोकथामका लागि नेपाल भित्रिने सबै नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने बताएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले एक सूचना जारी गर्दै नेपाल प्रवेश गर्ने सबै नाकामा हेल्थ डेस्क राखी एन्टिजेन परीक्षण गरिने बताएको छ। नाकामा परीक्षण गरी यदि कसैमा रिपोट पोजेटिभ देखिए उक्त भाइरस ‘ओमिक्रोन’ हो वा होइन भन्ने पत्ता लगाउन जीन सिक्वेन्सिङ गरिने जनाए। त्यसका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई समन्वय गरी नमुना टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
समाचारकाे भिडियो यहाँ तल हेर्नुहाेस्ः
धादिङमा बाटो खन्ने क्रममा पहिरोले डोजर पुरिएपछि अपरेटरसहित तीन जना बेपत्ता
टिकटकमा भाइरल अश्मिता रनपालको दुनियाँ चकित पार्ने प्रतिभा, हेर्नुस यस्तोसम्म गर्न स,क्छिन, आफन्तीले समेत यस्तो व्यवहार गर्थे… (भिडियो)
“एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली” अवस्य हेर्नुहाेस् (भिडियो हेर्नुहाेस्)
अमेरिका जाने भुपेन्द्रको सपना साथीहरुले नै तमाम पारिदिए!
दुबै हात नभएका दाईले सँसारलाई चकित पार्ने काम गर्दै…. (भिडियो हेर्नुहाेस्)